शिवम् सिमेन्टको बजारलाई देशैभर पुर्‍याउने योजनामा छौं
कोरोनाका कारण निर्माण क्षेत्र लामो समय प्रभावित रह्यो । लामो समयको बन्दाबन्दी अन्त्यसँगै विस्तारै निर्माणका काम शुरू हुन थालेपछि निर्माणसम्बन्धी उद्योग विस्तारै पुरानै लयमा फर्किरहेका छन् । माग नभएकै कारण सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन घटाएका भए पनि अहिले पूर्ववत् उत्पादन शुरू गरिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे शिवम् सिमेन्टका कन्ट्री हेड निखिल अग्रवालसँग अभियान दैनिकले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो केही वर्षयता विकास निर्माणले गति लिँदा निर्माण सामग्रीको माग बढ्दै गएको थियो । तर, कोरोना महामारीले यसलाई प्रभावित बनायो । कोरोनापछि सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना महामारीकै कारण राष्ट्रिय आयोजनाका काम अघि बढ्न पाएनन् र सर्वसाधारणले समेत घर बनाउन पाएनन् । त्यस कारण कोरोनाले समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्यो । कुनै क्षेत्रमा काम गर्न कठिन तथा कुनैमा सहज भए पनि कुनै उद्योग र परियोजनाको सामान्य काम भयो । कुनै उद्योग तथा परियोजना बन्द भए । कोरोनापछि धेरै ठूला परियोजना, विदेशी लगानी भएका परियोजना शुरू भएका छन् । कतिपय विदेशबाट फर्किएका दक्ष कामदार पुनः विदेश जान नपाउँदै देशमै दक्ष जनशक्ति परिचालन भएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित निर्माण क्षेत्रले दशैंपछि गति लिएको छ । निर्माणको सिजन भएकै कारण पनि होला, पुल, घर, भवन, सडकदेखि जुनसुकै परियोजनाले गति लिएको देखिएको छ ।
कोरोनापछि सिमेन्टको माग कस्तो छ ?
नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता निर्माणका काम बढिरहेकाले निर्माणमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सिमेन्टको माग पनि बढाएको छ । यसै कारण सिमेन्ट उद्योगको संख्या बढ्दै गएका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना नआएको भए धेरै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने भनिएका थिए । ती योजना शुरू भएर अहिले अघि बढिसकेका हुन्थे । कोरोनाकै कारण १ वर्षपछि बल्ल ती आयोजना सुरू हुने स्थितिमा छन् । तनहुँ, रसुवागढी, भोटेकोशीलगायत ठूला आयोजना शुरू हुँदै छन् । यसले पक्कै पनि सिमेन्टको माग बढाउँछ ।
कोरोनापछि शिवम्को उत्पादन कस्तो छ ?
कोरोनाको समयमा पनि शिवम्को मागमा कमी आएको छैन । माग एकदमै राम्रो छ । नेपालका अधिकांश ठूला परियोजना जस्तै, तनहुँ, रसुवागढी र अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग, ठूला पुल, सडक, निर्माण कम्पनी आदिले शिवम् सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणले आफ्नो घर, भवन बनाउँदा शिवम् सिमेन्टलाई विश्वास गरेको पाइएको छ । शिवम्को गुणस्तरकै कारण ग्राहक रोजाइमा पर्न सकिएजस्तो लाग्छ । हामी हरेक दिन ३ हजारदेखि ३५ सय टन अर्थात् ६० देखि ७० हजार बोरासम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्छौं, जुन सबै विक्री भइरहेको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादनका लागि शिवम्ले के–कस्ता प्रयास गरिरहेको छ ?
भर्खरै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शिवम्लाई ४३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्टको मान्यता दिएको छ । यससँगै ४३ ग्रेड ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ब्रान्ड बनेका छौं । विभागले एनएस ४९ प्रमाणीकरण गर्दै आए पनि यसअघि नेपाली सिमेन्ट कुनै पनि ग्रेड उल्लेख नगरी बजारमा आइरहेका थिए । विभागले सिमेन्टको उच्च गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न एनएस ५७२ को अवधारणा अगाडि बढाएपछि ४३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादनका लागि उक्त जाँच गरिएको थियो । यसमा चुनढुंगा, कच्चा पदार्थ, उत्पादन प्रक्रिया, क्लिंकर र उत्पादित सिमेन्टको लामो समयसम्म परीक्षण गरी उक्त ग्रेडिङ दिइएको हो । ग्रेडिङ भारवहन गर्ने क्षमताको स्तर हो । अहिलेसम्म शिवम् मात्रै एनएस ५७२ प्रमाणीकरण भई ४३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन र विक्री गर्न योग्य प्रमाणित भएको छ । यसबाट पनि हाम्रो गुणस्तरबारे थाहा हुन्छ । यसैगरी सिमेन्ट उद्योगमै अहिलेसम्म एनएस क्वालिटी अवार्ड पाउने एक मात्र कम्पनी शिवम् नै हो । एनएस गुणस्तर भएका सबै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामीले २०१९ मा यो अवार्ड पाएका थियौं । बीआईएस (इन्डियन स्ट्यान्डर्ड २६९, २०१५) बाट सम्मानित पनि भएका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेकै गुणस्तरीय उत्पादन हो ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले देशभर क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई कत्तिको असर गरेको छ ?
छिमेकी भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएर ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिइरहेको छ । खुला सीमाका कारण पनि नेपालमा कोरोनाको त्रास बढेको छ । तर, हामीलाई कोरोना आएर रोग लाग्ने हो कि भन्नुभन्दा पनि बन्दाबन्दी भएर भोक लाग्छ कि भन्ने त्रास छ । फेरि बन्दाबन्दी हुने स्थिति आए यसअघि हामी पूर्वावस्थामा फर्किन धेरै समय लागेको थियो । कतिपय उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेको छैन । फेरि बन्दाबन्दी हुने हो भने यसबाट पूर्वावस्थामा फर्किन अहिलेभन्दा बढी समय र लागत लाग्छ । सिमेन्ट, डन्डी उद्योग वा एउटा कुनै परियोजनाको मात्र नभएर लाखौं श्रमिकको कुरा पनि छ । फेरि बन्दाबन्दी हुने हो भने उद्योग, व्यापार, अर्थतन्त्र र मजदूर, श्रमिकका लागि त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हुन्छ । हामीले यसअघि नै अनुभव गरिसकेको हो, बन्दाबन्दी विकल्प होइन, यसलाई अन्य तरीकाले रोक्न सकिन्छ । दोस्रो बन्दाबन्दीका देश तयार हुन सक्ने स्थितिमा छैन । त्यस कारण कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भए पनि वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।
धेरै उद्योग पछिल्लो समय लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । शिवम्ले थप लगानी गरी उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा कस्तो योजना बनाइरहेको छ ?
हाम्रो सबैभन्दा लगानी हुने क्षेत्र भनेको उत्पादनलाई आजभन्दा भोलि कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामी हरेक दिन लागिरहेका छौं, अनुसन्धान गरिरहेका छौं । व्यापार विस्तार गर्न नयाँ–नयाँ बजार खोज्ने योजना बनाइरहेका छौं । देशभर सिमेन्ट पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं । उद्योगको क्षमता बढाउन पनि छलफल गरिरहेका छौं ।